Rosia: “Spassibo / Misaotra!” Na Ny Tsenambarotra Firaisankina Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2018 10:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Italiano, Português, বাংলা, Español, русский
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2012)
Ny toeram-pivarotana fanaovantsoa, dia karazana fivarotana iray tena ankafizin'ireo Eoropeana, mbola mijanona ho endrika tsy misy mpahalala ho an'ny varotra ao Rosia. Ny fahatongavan'ny “Spassibo!” [“Misaotra”] no lakoloksy fanombohan'ny firoboroboany. Ankehitriny, ilay famantarana fanaovantsoa dia lasa vondrom-piarahamonina iray an'ireo mpikatroka miaro ireo tetikasa sosialy feno famoronana.
Ny Tsenambarotra Firaisankina dia singa iray mahomby amin'ny fanodinana indray an'ireo fitafiana mitobaka be loatra sy ny fanangonam-bola anatina tanjona ho entina manampy amin'ny maha olona.
Pejy fandraisan'ny “Spassibo!”
Nanokatra fivarotana marobe ao Saint-Pétersbourg ny “Spassibo!”. Tsotra ny foto-kevitra: mitondra ireo karazana entana mbola tsara ireo Pétersbourgeois, izay fantenana sy tsinjarazaraina amin'ireo fivarotana sy ireo fikambanana mpanao asa soa. Noraisin'ny tarika mba ho fototra amin'ny fanapariahana ny fifandanjàna manaraka toy izao: ny 90% n'ireo entana dia mandeha any amin'ireo fikambanana fanaovantsoa isan-karazany, ary ny 10% kosa sisa no tonga any amin'ny fivarotana mba hamidy. Arotsaka ho an'ny fisahanana ny maha-olona avokoa ireo tombombarotra tavela rehefa afaka ireo fandaniana rehetra.
Hoy ny hevitry ny mpanjifa iray, Lakomka:
Faly aho fa mba manana fivarotana iray mahafinaritra isika eto. Hitondra ny fandraisana anjara keliko ho amin'ny asany aho, ampanetren-tena, satria ny fanaovan-tsoa manafana ny fo ary mahatsara ! =)
Te-hampiroborobo ny fotokevitry ny Tsenambarotra Firaisankina ao Rosia ny ekipan'ny Spassibo. Miaraka amin'ny fanohanany, marobe ireo fivarotana no misokatra any amin'ny faritra, ary vonona ireo tomponandraikitry ny toerana hanolotra manontolo ny fanampiana ilaina ho an'ireo izay liana amin'io làlana io.
Tetikasa mitodika amin'ny sosialy
Ny “Spassibo!” dia natokana ho an'ny kolontsaina, ho an'ny fiofanana sy ny tontolo iainana ary, ao anatin'ny sehatr'ireny hetsika santatra ireny, manomana fampiofanana, manomboka tetikasa ary mandray mpianatra asa.
Amin'ny ankapobeny ny asa tanterahin'ny “Spassibo!” dia vitaina eo noho eo. Tonga manohana azy ny vohikala Aterineto, amin'ny alalan'ny fametrahana vaovao anaty tambajotra ; asa iray famenony no entin'ny vovonana aterineto. Ny vohikalan'ilay Tsenambarotra Firaisankina “Spassibo!”, dia toerana iray hahafahan'ny mpampiasa aterineto mahita ny vaovao rehetra mikasika ny endrika “Tsena firaisankina” sy ny vaovao mikasika ilay tetikasa, na ihany koa fijerena ny diary.
ato ny lahatsoratra niaingàna